အသက်ရလာပြီဖြစ်တဲ့ မေမေဖေဖေတို့နဲ့ ခရီးအတူသွားရင်အသုံးတည့်မယ့် နည်းလမ်းလေးများ - Hello Sayarwon
Update Date အောက်တိုဘာ 23, 2020 .3mins read
ငယ်ငယ်က ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာတိုင်းကိုမေမေဖေဖေတို့ကလိုက်ပို့ပေးတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသွားကြတာရှိပါတယ်။ ဒီလိုကနေတော်တော်လေးအရွယ်ရလာတော့ မိဘတွေကလည်း အသက်ရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာကို ကိုယ်တွေကတစ်ခါပြန်ပို့ပေးရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာပြီနော်။ ဒါကိုက ဘဝရဲ့ လည်ပတ်မှုပဲမလား။ ဒီလိုမျိုး တစ်ပြန်တလှည့်ကိုယ်ကမေမေဖေဖေတို့သွားချင်တဲ့ရောတွေကို မိသားစုနဲ့အတူတူသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ လိုက်ပို့ရတဲ့အခါ အဆင်ပြေတဲ့ ခရီးစဉ်လေးဖြစ်စေဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုမလဲ စဉ်းစားရခက်နေမယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ကြည့်နော်။
ကျွန်မတို့ မဖြစ်မနေသိထားရမှာက ကျွန်မတို့တွေအရွယ်ရောက်လာလေမေမေဖေဖေတို့ကလည်း အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာလေလေပါ။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလောက် မပေါ့ပါးတော့သလို စိတ်သွားတိုင်းလည်း ကိုယ်မပါကြတော့ပါဘူး။မေမေဖေဖေတို့ကရောဂါကြီးကြီးမားမားခံစားနေရတာမဟုတ်ရင်တောင် အိုမင်းလာကြပြီဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီတော့မေမေဖေဖေတို့အတွက် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် ခရီးစဉ်တစ်ခုကို စီစဉ်ပေးတော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကိုမေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။
မသွားခင်ကပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တစ်ခုပေါ့။ အရွယ်ရလာတဲ့မိဘတွေက ခရီးပန်းတဲ့ဒဏ်ကို အရမ်းမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ အရမ်းဝေးတဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုမစီစဉ်ပါနဲ့။ အပန်းမပြေဘဲ ပိုပင်ပန်းသွားနိုင်တာကြောင့်ပါ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသွားနိုင်မယ့် ခရီးစဉ်ကိုသေချာလေးရွေးချယ်ပေးပါ။
သွားရမယ့်နေရာနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် အဝတ်အစားအသုံးအဆောင်တွေကိုသေချာလေးရွေးချယ်ပေးပါ။ အပူပိုင်းသွားတဲ့အခါ ချည်သားလက်ရှည်အေးအေးလေးတွေနဲ့ချွေးစုပ်မယ့်အဝတ်အစားမျိုး၊အေးတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုရင်နွေးနွေထွေးထွေးဖြစ်စေမယ့်အဝတ်အထည်မျိုးကိုသေချာလေးရွေးထည့်ပေးပါ။
(၃) အလွယ်တကူစားလို့ရမယ့် အစားအစာလေးတွေထည့်ပါ
လူကြီးတွေကလည်း ကလေးလေးတွေလိုပါပဲ။ ခရီးသွားနေရင်း ဗိုက်ဆာတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုလိုမျိုးရောဂါတစ်ခုခုခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့သွေးချိုကျသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အရံသင့်မုန့်ကလေးတွေဆောင်သွားတာ သင့်တော်မှာပါ။ ခရီးစဉ်တောက်လျှောက်မှာ စားစရာဆိုင်တွေရှိနေဖို့ ကမသေချာဘူးလေ။
မေမေဖေဖေတို့ကရောဂါတစ်ခုခုခံစားနေရတာဆိုရင် ခရီးမသွားခင်မှာပြနေကျဆရာဝန်နဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါ ဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတာနဲ့ ဘာတွေဆောင်သွားဖို့လိုမလဲဆိုတာတွေကို တိုင်ပင်ပါ။
ဆီးချို၊နှလုံး၊သွေးတိုးနဲ့ကျောက်ကပ်လိုမျိုးနာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုခုခံစားနေရာတာမျိုးကြောင့်ဆေးပုံမှန်သောက်နေရတာဆိုရင်သောက်နေကျဆေးတွေကို မမေ့မလျော့ထည့်သွားပါ။ ဆေးကို အချိန်မှန်တိုက်မိစေဖို့လည်း သတိထားပါ။
(၆) ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကို သိအောင်လုပ်ပါ
ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားတာက အကြောင်းသိပ်မရှိပေမယ့် ခရီးသွားကားနဲ့သွားတာမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကို သိထားဖို့လိုပါမယ်။ ဒါမှ ဘယ်နေရာမှာနားမယ်ဆိုတာကို သိပြီး အပေါ့အပါးသွားတာ၊ စားတာသောက်တာ၊အညောင်းပြေအညာပြေ လမ်းလျှောက်တာမျိုးလုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုသိထားပြီးပြင်ဆင်ပေးနိုင်မှာပါ။
(၇) သွားမယ့်ခရီးစဉ်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနတွေကိုသိအောင်လုပ်ပါ
အသက်ရလာပြီဖြစ်တဲ့မေမေဖေဖေတို့နဲ့ခရီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးပေါ်အနေအထားတွေကို ကြိုတင်သတိထားလိုက်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် သွားရမယ့်ခရီးစဉ်တလျှောက်နဲ့ ကိုယ်သွားလည်မယ့်နေရာနဲ့ အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနကို သိအောင်လုပ်ထားပါ။
ဆီးချိုရှိတယ်ဆိုရင်သွေးချိုတိုင်းတဲ့ကိရိယာ၊သွေးတိုးရှိတယ်ဆိုရင်သွေးပေါင်ချိန်စက်လိုမျိုး လိုအပ်အသုံးတည့်မယ့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိရိယာတွေကို တစ်ပါတည်းယူသွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဒါတွေအပြင် ယူသွားရမှာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ အသက်ရလာတဲ့မိဘတွေမှာ ကြုံရနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် ပစ္စည်းလေးပေါ့။ လူကြီးတွေက အသက်ရလာေလေ ဆီးထိန်းနိုင်စွမ်းနည်းလာလေလေပါ။ အရင်က ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ ခရီးသွားတဲ့အခါ ဆီးအိုးတွေယူသွားတတ်ကြပါတယ်။ အခုတော့ ဒီလိုလုပ်ဖို့မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် အခုဆိုရင်ဈေးကွက်ထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာလည်းရှိ၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ဝတ်ထားမှန်းတောင် မသိသာတဲ့လူကြီးသေးခံတွေရှိနေပါပြီနော်။ ဒီတော့ခရီးလည်းသွားချင်တယ် မေမေဖေဖေတို့က ဆီးမထိန်းနိုင်တာမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ လူကြီးသုံးသေးခံလေးတွေက အဆင်ပြေစေမှာပါ။
(၉) အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်တွေယူသွားပါ
ခရီးသွားတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဖုန်းထဲထည့်မှတ်သွားတာဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်သွားတာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးပါ။ ဖုန်းကိုဘေလ်ဖြည့်သွားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
(၁၀) မကြာခဏ အဆင်မပြေတာရှိလားမေးပါ
ခရီးစဉ်တလျှောက်မှာ ၅ မိနစ်တစ်ခါလောက်တော့မေးခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး ၄၅ မိနစ်တစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့ အဆင်ပြေရဲ့လား၊ သက်တောင့်သက်သာရှိရဲ့လား ဘယ်နေရာကများနေလို့မကောင်းဘူးလဲဆိုတာကို ဂရုတစိုက်လေးမေးပေးပါ။မေမေဖေဖေတို့က အားနာပြီး အပေါ့အပါးသွားချင်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းမူးနေတာမျိုးကိုဖြစ်ဖြစ် မပြောဘဲနေနေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ကဲ ဒီအချက်လေးတွေကို လက်တွေ့အသုံးချပြီးမေမေဖေဖေတို့နဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါနော်။
Traveling with an Elderly Parenthttps://www.aplaceformom.com/blog/3-13-17-traveling-with-an-elderly-parent/ Accessed Date 22 February 2019
7 Tips for Safe Travel With Seniorshttps://www.aplaceformom.com/blog/03-07-16-safe-and-healthy-travel-with-seniors/ Accessed Date 22 February 2019
Caregiver Tips for Traveling with the Elderlyhttps://www.aplaceformom.com/blog/2013-10-15-caregiver-tips-traveling-with-elderly/ Accessed Date 22 February 2019
Tips for Traveling with Elderly Parentshttp://advocatingfortheaging.com/tips-traveling-elderly-parents/ Accessed Date 22 February 2019
လူကြီးပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆီးပြဿနာကို ဘယ်လိုကူညီဖြေရှင်းကြမလဲ
မွေးကင်းစ ချို့ယွင်းချက် လမစေ့ ပေါင်မပြည့် ကာကွယ်ဆေး လက်ဆေး ချော့မြှူ သေးခံလောင် အနှီး ရေချိုး ချက်ကြိုး နို့တိုက် ကလေးအိပ်စက်ခြင်း၊
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဩဂုတ် 20, 2020 .3mins read
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေ၊ ဖေဖေ၊မေမေ တွေရဲ့ အရိုးအဆစ် နာကျင်မှုပြဿနာကို ဖြစ်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်း၊နေထိုင်သင့်တဲ့အနေအထား၊ပြုစုကုသပေးပုံတွေကို လေ့လာသိရှိထားသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးခြင်း, အဖြစ်များသော လူကြီးရောဂါများ ဩဂုတ် 17, 2020 .2mins read
မေမေ တစ်ယောက် ဖြစ်ရတာ လွယ်ကူရဲ့လား။ ဝန်တာတွေ များပြားလှတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်ရပ်ကို မေမေ လို့ ခေါ်တာပါ။ ကလေးကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ကြီးပြင်းလာစေဖို့
မိဘများအတွက်လမ်းညွှန်, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဩဂုတ် 3, 2020 .3mins read
ဘေဘီလေး ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာကို သက်သာစေဖို့ ဘာတွေဂရုစိုက်ပေးဖိုပ လိုမလဲ။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ။
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဇူလိုင် 22, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 30, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 29, 2020 .4mins read